Swaarm: Gadzirisa, Gadzirisa, uye Kuyera Yako Yekushambadzira Performance | Martech Zone
Swaarm ndeyekuita-based yekutevera chikuva iyo inopa vamiririri, vashambadziri, uye network nekwanisi yekuteedzera zvizere uye kudzora kwavo kushambadzira kuyedza mune chaiyo-nguva kuve nechokwadi chinobatsira kukura.
Iyo chikuva chakagadzirwa kubva pasi kusvika pakuva nyore kushandisa, asi zvine simba, iine data-inotyairwa mushandirapamwe automation kubatsira vashambadzi kubudirira kuyera uye kugadzirisa makampeni pamutengo wehupfumi.
Panzvimbo pekumusoro-pasi nzira, isu takavaka ichi chigadzirwa pasi kumusoro. Kubva pakutanga chaipo, takatanga kuyedza nevatengi chaivo kuita kuti chiito chega chega chive nyore, nekukurumidza, uye zvirinani. Kunge iOS neAroid zviri kumafoni edu, isu tinoshuvira kuve iyo Inoshanda Sisitimu yeKushanda Kwekushambadzira.
Yogeeta Chainani, Co-muvambi uye CPO weSwaarm
Kuvhura kukosha kwedata, Swaarm mhinduro yakabatana, nekambani inovavarira kugadzirisa mamwe emabhizimusi makuru matambudziko ekuwedzera mabhizinesi. Nepo zvazvino misika yekupa ichingopa mashoma ruzivo rwe data, ichiri kuda yakakura mashandiro ebasa mashandiro, uye inouya nemhando dzisina kukwana dzemitengo, Swaarm yakavakirwa kukurira aya marwadzo mapoinzi. Ipuratifomu inobvumidza makambani kuita sarudzo dzinotungamirwa nedhata uye kuyera bhizinesi ravo pamutengo uri nani nekupa yakanyanya mwero yekushandisa.
Isu takaderedza edu ekuteedzera mitengo kusvika kune chetatu nekufamba kuenda kuSwaarm. Panguva imwecheteyo, zvishandiso zvekushandisa zvakatibatsira kuwedzera kugona kwedu zvichikonzera kukwidziridzwa kwemari kwe20%. ”
Swaarm Performance Kushambadzira Zvimiro Sanganisira
Swaarm Inopa kune izvo zvinodikanwa zvevaviri vashambadzi vanogona kufamba nematanhatu emata data nediki mabhatani uye data-savvy mabhizinesi ayo anogona kushandisa akaisirwa data sainzi maturusi kudzika mukati medu granularities.
Partner Mushandisi Mushandisi - Inotendera vanobatirana kuti vaone yekutevera & emari nhamba mune chaiyo-nguva.
Smart Links - Kupa vaparidzi veCPM shambadziro chaiyo yemushandisi chaiye, zvichibva pamhando yepamusoro yemuchina yekudzidza algorithms.
Kubhadhara & Kubatanidza - Simbisa nhamba dzako dzemwedzi nemwedzi nenhamba dzemumwe wako kuti ubhadhare nekukurumidza.
Network Syncer & Zvoga Zvipo Tumira - Rongedza otomatiki uye kumisikidza zvinopihwa kubva kune yakawanda huwandu hwevamwe.
Chaiyo-Nguva Yakagadziriswa CR Kugonesa - Gadzirisa zviito zvichibva pane chaiyo-nguva data kukwidzirisa traffic.
Yepamberi Targeting - Yechokwadi-nguva kurambidzwa kweiyo geo, zvishandiso, traffic-mhando, vatakuri, chero imwe tsika data.
Insights Kuzivisa - Tsvaga mapatani, maitiro, uye mikana yebhizinesi mune yako data, iigovane nevavanoshanda navo.
24/7 Yekutevera Yekubatanidza Scan - Ziva kana chinongedzo chekutevera chiri chakakodzera kune kwese kupihwa mune yako system.
Shanyira Swaarm Kuti Uwane Ruzivo
Tags: ad performancechikuva chekutevera chikuvaadtechdigital advertisingkuita kwekushambadziramashandiro ekushambadzira chikuvaswaarm
RudderStack: Vaka Yako Pachega Vatengi Dhata Platform (CDP)